Shiikh Shariif, Shiikh Xasan Daahir Aways ayaa gaadhay Dalka Masar | maakhir.com
Shiikh Shariif, Shiikh Xasan Daahir Aways ayaa gaadhay Dalka Masar
February 11, 2008 in Somalia
Caira:- Sadexda Masuul ee ugu sareeya Ururka dibu xoraynta Umada Somaliyeed ayaa maanta Gaadhay Xarunta Dalka Masar ee Qaahira, waxa la soo sheegayaa in halkaasi sid diiran loogu soo dhaweeyay,Ilo ku dhaw dhaw ragaasi ayaa sheegaya in ujeedkoodu yahay ka dib markii ay marti qaad rasmi ah ka heleen Dalka Masar.
Sheekh Xasan Daahir Aweys iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ka mid ah hogaanka sare ee Isbahaysigaasi ayaa shaley waxay gaareen caasimada wadanka Masar ee Qaahira ka dib markii ay martiqaad ka heleen dawlada Masar, iyadoo sidoo kalena saacadihii la soo dhaafey uu magaalada Qaahira tagey Gudoomiyaha Isbahaysigaasi Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Ilo wareed aad loogu kal soon yahay ayaa sheegay inay Dawlada Masar ay xubnahaasi u fidisay Go Gol marti qaad ah iyada oo sheegtay inay dhex dhexaadin ka dhex abuurayso Dawlada Federaalka ah iyo Kooxahaasi oo aad isaga biyo diidsan, Masar ayaa sheegtay inay Dadaalkaasi kula jiraan Q.M iyo Dawlada Talyaaniga oo iyagan xooga saaraya sidii laysu hor fadhiisin lahaa.
Wararkale oo aan si buuxda loo shaacin ayaa sheegaya in Todobaadkii la soo dhaafay uu kulan saxaafada Daaha laga saaray uu ku dhex maray Magaadalada Dawxa Masuuliyiin ka tirsan wasaaradaha arimaha dibada ee Dalka Maraykanka iyo Shiikh Shariif Sh. Axmed, dad ku dhaw dhaw kulankaasi ayaa tibaaxay inay ka wada hadleen amuura khuseeya arimaha Somaliya kuwaasi oo ay ugu wayn tahay sidii loogu kala dab qaadi lahaa Kooxaha Mucaaradka ah iyo Dawlada Somaliya.
Lama saadin karo in wada hadaladaasi laga biyo dhalin doono iyo in kale iyada oo ay wali dalka Intiisa badan joogaan ciidamada Dawlada Itoobiya oo ay shurood mar kasta ka dhigaan Kooxaha Asmara in Dalka Laga saaro isla markaana ay ogalaanayaa wada hadal dhex mara iyaga iyo Dawlada Somaliya.
« Ayaan Xirsi oo Magan galyo u raadstay Dalka France
Dooni nooca Kaluumaysiga ah ayaa ku soo caariday Xeebta Cad Cado ee Gobolka Sanaag »